ဘီပိုး စီပိုး သမားတွေ အပြင် မြွေဆိပ်ပါနိုင်တဲ့ သခွပ်ပင်အကြောင်
အဆိပ်အားလုံးရဲ့ဖြေဆေး (သခွပ်ပင်) မြွေဆိပ်နိူင်တဲ့ ဟင်းငုတ်ပင်(မေတ္တာဖြင့် တောင်ကြီးသား) ဟင်းငုတ်ပင်ကိုဒေသအလိုက်သခွပ်ပင် ဟင်းဂုတ်ပင် ဟင်းဂွတ်ပင်ဟု ခေါ်ကြသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးပေါက်သည်။ နှစ်ရှည်ပင်ကြီး။ ပင်စည်တွင် အခေါက် အပွေးမရှိ။ အရွက်အနည်းငယ်ဝိုင်း။အပွင့်အဖြူရောင်။ပဒိုင်းပွင့်နှင့်တူသည်။ တန်ခူးမှဝါဆိုလအထိပွင့်သည်။အသီးမှာသေးသေးရှည်ရှည်။နှစ်ပေခန့်ရှိ။ ဆေးဘက်ဝင်ဝင်ပုံ အခေါက် ၁။ မြွေပွေး။မြွေဟောက်ကိုက်ခံရပါကအခေါက်ကိုအမြန်ဝါးစားလိုက်ပါလျှင် အဆိပ်မရှိတော့ပါ။ငန်းတော်ကျား။ငန်း မြွေ အပါအဝင်ပါ။ (မြွေပွေးနှင်မြွေဟောက်သာအကိုက်ခံသူရှိ၍ဦးစားပေးဖေါ်ပြရခြင်းပါ) ၂။ အဆိပ်ရှိ သတ္တဝါလေးများကိုက်လျှင်လည်းအခေါက်ဝါးးစားပါ။ ၃။ မျက်စေ့နာပါကအခေါက်သွေးပြီးမျက်လုံးကွင်းလိမ်းပါ။မကျည်းခေါက်လိုအပွေးမရှိ။ ၄။ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲပါက အခေါက်ပြုတ်ရေ ချိုးပါ။ အပွင့် ၁။ ရှေးကတည်းကကလေးတွေကိုရောဂါကင်း။ကိုယ်တွင်းအဆိပ်ကင်းသည်ဆိုကာသုပ်ကျွေးသည် ၂။ အပွင့်ကိုရေနွေးဖျောရုံဖြင့်ကျက်သည်။အခြောက်ဆိုရင်ပြုတ်ရသည်။အခြောက် အရောင်မဲနေသည်မှလွဲ၍အရသာမပြောင်းပါ။ ၃။… Read More
ကျွန်တော့်သမီး၏ခြေသလုံးမှာဝဲနှင်းခူအပြည့် ပေါက်နေပါသည်။ ကရင်လူမျိုးဖထီမှပေးသောဆေးဖြစ်ပါသည် ကြုံတဲ့သူတိုင်းဆေးနည်းပေး၍ပေးတဲ့သူများလည်း သက်သာပျောက်ကင်းပါသည်။ မည်သည့်ဝဲနှင်းခူပဲဖြစ်ဖြစ်ပျောက်ပါသည် နှစ်ပေါင်း သုံးလေးဆယ် ကြာပါစေ မည်သည့်အစားမှ ရှောင်ရန်မလိုပါ တွင်းအောင်းသားပါစားနိုင်သည် ။ ဆေးနည်း – ဥနဲရွက်( ဆေးရိုးရွက် ) – ဇီးရွက် – ထိကရုံပင် အရိုင်း ( ပဉ္စငါးပါ ) ဥနဲရွက် နှစ်ဆ ကျန်ဇီးရွက် ထိကရုံပင် တစ်ဆ တစ်နေ့လှန်း ခြောက်ရင် သံပြားပ်ါမီးတင် ပြာချ အမှုန့်ပြုပါ ။ ထိုဆေး အမှုန့်ကို ရေနံချေး… Read More
လူတွေမသိတဲ့ ဗုံလုံသီးရဲ. ကျန်းမာရေးလျှို့ဝှက်ချက်များ
ဗုံလုံသီးကတော့ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အသီးသီးတဲ့ အပင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ သီးသာမက အရွက်များကိုလည်းဟင်းတစ် ခွက်အဖြစ်စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်တွေ သတ္တုဓတ်တွေ ပါရှိလို့ ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်တဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုံလုံသီးထဲမှာတော့ အစိုဓာတ်၊ ကယ်လိုရီ၊ ပရိုတင်း၊ အဆီဓာတ်၊ အမျှင်ဓာတ်၊ ကစီဓာတ်၊ ကယ်လ်စီယမ်၊ သံဓာတ်၊ တို့ပါရှိပါတယ်။ ဗုံလုံသီးကိုစားခြင်းအားဖြင့် ချွဲသလိပ်ပျော်စေ ပါတယ်။ အဆုတ်၊တီဘီတို့အတွက် ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုံလုံသီးအရွက်က လည်း ညချွေးထွက်လွန်ခြင်း တို့အတွက်စားသင့်တဲ့ဟင်း တစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။. ရေဓာတ်ပြည့်ဝစွာပါရှိတဲ့ ဗုံလုံသီးဟာ အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းကို သက်သာစေတဲ့အပြင် ကိုယ်တွင်းအပြူုငိမ်းကာ နွေရာသီအတွက်သင့်တော်တဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။… Read More
၂ ။ ​ချောင်းဆိုးလျှင်​….ခ​ရေပွင့်​ကိုတညလုံး​ရေစိမ်​၊ နံနက်​တွင်း ထို​ရေကိုစစ်​၍​သောက်​ပါ ၊​ပျောက်​၏ ။ ၄၃ ။ ရင်​ပြည့်​ရင်​ကယ်​ ..ကြက်​ဟင်းခါးသက်​​စောင့်​​ဆေးကို နှမ်းဆီ –ပရုပ်​ဆီဖြူ ဖြင့်​​ဖျော်​၍ ရင်​မှအသာအယာသပ်​ချပါ ။ ၄၄ ။ နှာပိတ်​​သော်​…..ကြိတ်​မှန်​ရွက်​ ​ခွေး​သေးပန်းရွက်​ နှစ်​ပါးကြိတ်​ ၊ ရှိန်းခိုနဲနဲထည့်​ ၊ ငယ်​ထိပ်​မှနှာ​ခေါင်းအထိ​ဆေးအရည်​နှင့်​ဆွဲ​ပေးပါ ။ ၄၅ ။ တက်​လျှင်​….ဆင်​ငိုမြက်​ပြုပ်​ရည်​ကိုတိုက်​ပါ ။ အတက်​ချက်​ချင်းကျသွားမည်​ ။ ၄၆ ။​ရေငတ်​ဝမ်းကျ …..ဆီးသီးအ​စေ့အတွင်းမှအဆန်း​ကို အမှုန့်​ပြု၍ နွယ်​ချိုနှင့်​​ရောပြီးစား​ပေးပါ ။ ၄၇ ။… Read More
အိန္ဒိယလူမျိုးတို့ရဲ့ နာမည်ကျော် ယောက်ျားအားတိုးဆေး
အားတိုးဆေး (Zawgyi) အိန္ဒိယလူမျိုးတို့၏ ယောက်ျားအားတိုးဆေး ကြက်သွန်နီဥကြီး တစ်လုံးကို အရည်ညှစ်ပါ။ ယင်းအရည်(၁)ဆလျှင် ပျားရည်စစ်စစ်(၂)ဆ ရောပြီး မီးငွေ့ငွေ့ဖြင့် တည်ရပါသည်။ ကြက်သွန်နီအရည်များ ခန်း၍ ပျားရည်သက်သက် ကျန်ပါလျင် ကျန်သော ပျားရည်၏ (၃)ဆမျှရှိသော ရေနှင့်ရော၍ ကုလားပဲတော်သင့်ရုံမျှ ထိုရေတွင်(၂၄)နာရီကြာအောင် စိမ်ရပါမည်။ ဆေးညွှန်းတွင် များစွာစားပါက နှိမ်မရအောင်ဖြစ်တတ်၍ သင့်တော်ရုံစားလေဟု ဆိုပါသည်။ ယင်းဆေးနည်းမှာ အိန္ဒိယလူမျိုးတို့၏နည်း ဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြထားပါသည်။ ကျမ်းစာကိုး။ ကျိုက္ခမီ အရှင်ဣန္ဒာစက္က၏ အထွေထွေဆေးနည်းကျော်များ စာအုပ်မှထုတ်နုတ်ပါသည်။ လိုသူတို့ သုံးနိုင်ပါရန် စေတနာဖြင့် ထုတ်နုတ်တင်ပြအပ်ပါသည်။… Read More
အဆင့်လွန်နေပြီမို့ သုံးလသာခံတော့မယ့် ကင်ဆာရောဂါသည်ရဲ့ ဆေးစွမ်းကောင်း
ဒီဆေးနည်းသိတာကြာပါပြီ။ ဆေးပင် ဓါတ်ပုံမရှိတာနဲ့ မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဓါတ်ပုံ ရပြန်တော့လည်း အလုပ်များနေတာနဲ့ မရေးဖြစ်ပြန်ဘူးလေ။ တလောက အမရပူရမြို့၊ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်က သူငယ်ချင်း စာချဘုန်းကြီးတစ်ပါး အသဲကင်ဆာဖြစ်လို့ ရန်ကုန်ဆေးရုံတက်တဲ့အကြောင်း သူ့တပည့်ရဲ့ FB မှာတွေ့ရတယ်။ ဒီဆေးနည်းလေးပြောပြလိုက်ပါလို့တော့ ပြောမိရဲ့။ ပြောသလားတော့မသိ။ ယနေ့တော့ ပဋ္ဌာန်း သင်တန်းသူ တစ်ဦးရဲ့ဆွေမျိုးတစ်ဦး အသဲကင်ဆာ ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပြန်တယ်။ သူ့ဆွေးမျိုးက မြန်မာပြည်မှာပါ။အသဲကင်ဆာ ဆိုရင် ဆေးနည်း ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်မိတယ်။သူကအပူတပြင်းတောင်းတယ်လေ။ ခုလာယူရမလားတဲ့။ဆေးမရှိပါ။ ဆေးနည်း သာ သိထားတာပါ။ ဆေးကုတဲ့ဘုန်းကြီးလည်း မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တတ်နိုင်သလောက်တော့… Read More
( က ) ဆီချိုးရောဂါသမားအတွက် လက်ပံပွင့်ကိုပြုတ်စားပါ။ လက်ပံပွင့်ကိုဟင်းချိုချက်စားပါ။ ဆီချိုရောဂါသမားအတွက်ဆေးကောင်းတစ်လက် ( ခ ) သွေးတိုးရောဂါသမားအတွက် ဇီးသီးနဲ့လက်ပံပွင့်ရောပြီးဟင်းချိုချက်စားပါ။ သွေးတိုးရောဂါပျောက်ကင်းစေသောဆေးတစ်လက် ( ဂ ) မီးယပ်​ရောဂါသမားအတွက် လက်ပံအခေါက်ပြုတ်ပြီးသောက်ပါ။ သွေးဆုံမီယမ်အမျိုးသမီးဆေးကောင်းတစ်လက်​ ( ဃ ) လေးဖက်နာသမားအတွက် လက်ပံပင်အမြစ်ကိုသွေးပြီးသောက်ပါ။ပြီးလျှင်ခြေဆစ် လက်ဆစ်ကိုလိမ်းပေပါ။ လေးဖက်နာရောဂါ'( ၃ ) မျိုးရှိကြပါတယ်။ နံ ပါတ်( ၁ ) ပိုးလေဖက်နာ နံပါတ်( ၂ ) သွေးလေဖက်နာ နံပါတ်( ၃… Read More
ရေနွေးကြမ်းနှင့် နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့်ခြင်း
ဒီဆောင်းပါးလေး ဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။ ထမင်းစားပြီးတိုင်း ရေနွေးသောက်ဖို့သတိပေးတာ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပဲ နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့် စေတဲ့ရောဂါကိုလဲ သတိပေးရာ ရောက်ပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုး နဲ့ဂျပန်လူမျိုး တွေ ဟာ ထမင်းစားနေစဉ် မှာ ရေနွေး သောက်သုံးတဲ့အလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ရေအေး ( ရေခဲ ရေ သောက်သုံးလေ့ )… Read More